Madaxweyne Gaas oo soo xiray Shirkii wadatashiga Puntland oo Gaalkacyo lagu soo Gaba-gabeeyay – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo soo xiray Shirkii wadatashiga Puntland oo Gaalkacyo lagu soo Gaba-gabeeyay
Agoosto 29, 2015 10:43 b 0
Sabti, Ogoosto 29, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 29-8-2015 soo xiray Shirweynaha Wada-tashiga Puntland
Shirweynahaan ayaa waxaa uu u socday Ergooyin badan oo isugu jira rag iyo dumar laga soo kala xulay Gobalada Puntland , waxaana soo xiritaankiisa maanta goob joog ahaa Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad iyo masuuliyiin kale duwan.
Ujeeda guud ee shirka oo aheyd in la adkeeyo wada jirka Bulshada Puntland, lana taban-taabiyo Nabadda, kalsooniada iyo is aaminaada bulshada , lana xaqiijiyo midnimada umadda iyada oo la marayo hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo madasha shirka ka jeediyey khudbad dheer oo taariikhi ah dhinacyo badana taabanaysa ayaa sheegay in Dawladda Puntland ay soo dhaweynayso qodobada ka soo baxay shirka mudadii uu socday.
‘’ Go’aamada aad isku raacdeen shirka anana waan idinku raacnay , waxaana la rabaa go’aamada aad isku raacdeen inay fulaan , anagu waan fulinaynaa laakiin idinka haydinka fusho ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu rajeynayo in toban sano kabacdi in shirkaan shir lamid ah ay isugu yimaadaan umadda reer Puntland , isagoona ku amaanay ergooyinka isu imaanshaha shirkaan qaran.
Shirkaan ayaa noqonaya hadii eebe idmo mid xoojinaya xiriirka bulsho ee Puntland, iyadoo laga shidaal qaadanayo rabitaankii jiray shirweynihii lagu asaasay Puntland 1998-dii lana tixgelinayo daruufaha jira .